नागरिकलाई भ्रममा राख्ने एनआरएन नागरिकता - फ्री प्रेस नेपाल
by प्रेमचन्द्र राई
५ कार्तिक २०७५, सोमबार १६:५०
in डायस्पोरा, बिचार, राजनीति, समाज
एनआरएन नागरिकता आँखामा छारो हाल्न ल्याईएकोछ । यसले आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकार मात्र उपभोग गर्ने अधिकार दिन्छ, राजनीतिक अधिकार उपभोग गर्न पाईंदैन । यो भनेको बिदेशमा बसोबास गर्ने ४० लाख नागरिकलाई अनागरिक बनाउने षड्यन्त्र हो ।
बिदेशमा बस्नेले मताधिकारको माग उठाएपछि एनआरएन कार्ड दिईयो । अहिले एनआरएन नागरिकता दिईने भनिएकोछ । यो पनि आँखामा छारो हाल्न ल्याईएकोछ । गैरआवासीय नागरिक सम्बन्धि ऐनले प्रष्ट भनेकोछ – ‘एनआरएन नागरिकताले आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकार मात्र उपभोग गर्ने अधिकार दिन्छ । यसबाट राजनीतिक अधिकार उपभोग गर्न पाईंदैन ।’ गैरआवासीय ऐनले के पनि भन्छ भने नेपाली नागरिकता त्याग्नेले यी अधिकार उपभोग गर्न पाउँदैन । यो आफैमा बाँझिएको कुरा हो ।
अहिले एनआरएनले पाउने भनेको नागरिकता कमोबेस एनआरएन कार्डकै निरन्तरता हो । राजनीतिक अधिकार बिनाको नागरिकता । गैरआवासीय नेपाली दुई प्रकारका छन् । पहिलो, नेपाली नागरिकता त्यागेका बिदेशमा बस्ने नेपाली मूलका नागरिक । दोश्रो, नेपाली नागरिकता नत्यागेका सम्बन्धित देशको स्थायी आवासीय सुविधा (पिआर) लिएको नेपाली नागरिक ।
एनआरएन नागरिकता पाएपछि यी मध्ये एउटाले गैरआवासीय नागरिकता बोक्नेछ भने अर्काेले नेपाली नागरिकता बोक्नेछ ।
एउटा नेपाली मूलको बिदेशी नागरिक हो भने अर्काे बिदेशमा स्थायी बसोवास कार्ड लिएको नेपाली नागरिक जोसंग नेपाली नागरिकता छ । आखिर यी दुई नागरिकताबीच के फरक भयो त ? यस्ता काईते ब्यवस्था गरेर गर्न के खोजिएको हो ? यो भ्रममा पार्ने कुरा हो । राज्यले आफ्नो नागरिकलाई यसरी भ्रममा राख्न मिल्छ ? नाम भिन्न दिईयो । ब्यवस्था छुट्टाछुट्टै गरियो । तर सुविधा दिनेबेला चाहिं एउटै बनाईयो ।
अनागरिक बनाउने नीति
संविधानले सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा रहनेछ भनेकोछ । संविधानले प्रत्येक नागरिकको अभिब्यक्ति स्वतन्त्रता हुन्छ भनेकोछ । उसले मतदानबाट अभिब्यक्ति स्वतन्त्रताको उपभोग गर्छ । मतदानमा भाग लिन पाउने उसको मौलिक अधिकार हो । नागरिकहरुले त्यो सार्वभौमसत्ताको उपयोग आवधिक निर्वाचन मार्फत गर्छन भन्ने छ । यी मौलिक अधिकारहरु कुनै भेदभाव बेगर नागरिकहरुले उपभोग गर्न पाउनुपर्छ भनेकोछ । त्यसको अर्थ यो अधिकार बिदेशमा गएको वा नेपालमा भएको जसले पनि बिना भेदभाव उपभोग गर्न पाउनुपर्छ भनिएको हो ।
संविधान कार्यान्वयन प्रक्रियामा जाँदा नागरिकले त्यो सार्वभौमसत्ताको उपभोग गर्न पाएका छन् कि छैनन ? निर्धक्क त्यो मौलिक अधिकारको अभ्यास गर्न पाईरहेका छन् कि छैनन ? त्यो जाँच्न निर्वाचनलाई पहिलो आधार बनाइने गरिन्छ । नागरिकले आफ्नो मताधिकारको अभ्यास गर्न पाएका छन् कि छैनन भनि हेरिन्छ ।
त्यसरी हेर्दा देशको ठुलो जनसंख्याले संविधानले दिएको मौलिक अधिकारकै उपभोग गर्न पाईरहेका छैनन । विभिन्न प्रयोजनका निम्ति बिदेशमा गएका करिब ४० लाख नेपाली नागरिक सार्वभौमिक अधिकारबाट बन्चित भैरहेकाछन् । यो सानो संख्या होईन । नागरिकको अधिकार बिना भेदभाव संरक्षण गर्ने दायित्व राज्यको हो ।
राज्यले आफ्नो यो कर्तब्य पूरा गर्नुपर्छ भनि २०७४ सालमा मैले सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेकोथिंए । निर्वाचन आयोग, परराष्ट्र मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, ब्यवस्थापिका संसद लगायतका सम्बन्धित संस्थालाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेकोथिंए । त्यसै साल यसमाथि फैसला भयो । सर्वाेच्च अदालतले मेरो तर्कलाई स्विकार गर्यो । विश्वको जुनसुकै कुनामा भएपनि नागरिकको मत हाल्न पाउने अधिकार राज्यले सुनिश्चित गरिदिनुपर्छ भन्यो ।
बिदेशमा हुने नेपालीलाई आफ्नो मौलिक हक अधिकार उपयोग गर्न गराउन राज्यले ब्यावहारिक रुपमा धेरै काम गर्नुपर्छ । पूर्वाधारहरुमा ध्यान दिनुपर्छ । आधारभूत रुपमा राज्यले तयारी पनि गर्नुपर्यो । यो सबै काम ब्यावहारिक रुपले तत्काल गर्न नसकिने हुनाले रिट खारेज गरियो तर सर्वाेच्चले आदेश सहित के भन्यो भने ‘यो माग दावी सहि हो । राज्यको दायित्व हो । राज्यले त्यो पूरा गर्न सम्भव छ र गर्नैपर्छ ।’ भनि सरकारलाई यो ब्यवस्था गर्न आदेश दिएकोछ । बिदेशमै गएको आधारमा नागरिकहरु मताधिकारबाट बन्चित हुनुहुदैंन । सरकारका निम्ति यो बाध्यकारी आदेश हो । उ यसबाट यो वा त्यो बहानाबाट पन्छन सक्दैन ।
सर्वाेच्चले आदेशमा आफ्नो नागरिकको अधिकार संरक्षण गर्न गराउन निम्न आदेशहरु दिएकोछ :
१ – बिदेशमा काम गर्न गएका श्रमिकको मात्र हैन सबै नेपालीका लागि मतदानको ब्यवस्था गर । सबै नेपाली नागरिक मतदानबाट बन्चित नहुनेगरि अनिवार्य रुपमा मतदान गर्न पाउनेगरि ब्यवस्था गर्न भन्यो । हामीले बिदेशमा गएका नेपाली कामदारको मताधिकारको अधिकार संरक्षण हुनुपर्छ भनेकाथियौं । अदालतले दुई कदम अगाडि बढेर काम गर्न गएको मात्र होईन अध्ययन गर्न गएका, ब्यापारी, कुटनीतिक नियोगका कर्मचारी र कामदारहरु जोसुकै भएपनि तिनको मताधिकार सुनिश्चित गरिदिनु राज्यको दायित्व हो भन्यो ।
२– जो देश बाहिर छन् । जसको निर्वाचन आयोगको मतदान नामावली सूचीमा नाम छ तर ति विभिन्न कारणले बिदेशमा छन् । ति नागरिकलाई मतदानको ब्यवस्था गर भन्यो ।
३– कसरी मतदान गर्ने त्यस सम्बन्धि कस्तो प्रणाली बिकसित गर्ने हो रिट निवेदक सहितको संलग्नतामा अध्ययन गरि ब्यवस्था गर भनेकोछ। कसरी मतदान गर्ने हो त्यस सम्बन्धि प्रणाली बारे अध्ययन गरेर यपर्युक्त प्रणाली बिकसित गरेर काम गर्न भन्यो ।
४ –सम्बन्धित देशसंग कुटनीतिक माध्यमबाट पहल गरि मतदान दिलाउने ब्यवस्था गर्न भन्यो । यो किन भन्यो भने निर्वाचन सम्बन्धि विभिन्न मुलुकका आ–आफ्नै नियम कानुन हुन सक्छन् । त्यसैले राज्यले सम्बन्धित देशसंग कुटनीतिक रुपमा छलफल गरेर मतदानको ब्यवस्था गर्नु भन्यो ।
५ – त्यसका लागि चाहिने बजेट लगायतको आवश्यक पूर्वाधारको जोहो गर भन्यो । यसका निम्ति भौतिक पूर्वाधारका निम्ति के के तयारी गर्नुपर्ने हो, गर्नुपर्यो । जसरी भएपनि नागरिकहरु मतदानमा सहभागी हुन पाउने ब्यवस्था गर्नुपर्यो भनेकोछ ।
जस्तै मतदान कहाँ गर्ने ? मटपेटिका कसरी ल्याउने ? कुन माध्यमबाट मतदान गर्ने ? मतपत्रको सुरक्षा कसरी गर्ने जस्ता विविध विषयहरु छन्, जसमा राज्यले तयारी गर्नुपर्यो । तयारी बेगर तत्कालै लागु गर भन्दा त्यो सम्भव नहुने हुनाले सम्भव नहुने रिट खारेज भयो तर आदेश चाहिं दियो ।
उदाहरणको लागि एक करोड चालीस लाख कुल मतदाता मध्ये एक करोड चालीस लाख ( ३५ लाख नेपाली ) बाहिर छन् । उनीहरु सक्रिय मतदाता हुन् । यत्रो ठुलो जनसंख्यालाई मतदानबाट बन्चित गरेपछि निर्वाचित भएका जनप्रतिनीधिको बैधानिकतामाथि सोझै प्रश्न उठ्न सक्ने भो । सबै नागरिकले मतदान गरेको हो त भन्दा गरेको होईन । यो यथार्थलाई सर्वाेच्चले बुझिसकेपछि उसले राज्यलाई तिनको मताधिकार सुरक्षित गर्न आदेश दिएको हो ।सरकारलाई तुरुन्त यसका निम्ति पहल गर्न भनेकोछ । आउने चुनाव सम्ममा यसको प्रक्रिया थाल्न आदेश दिएकोछ । यो बाध्यकारी हो ।
संभव छ त यो ?
प्राविधिक रुपमा संभव छ । अहिले प्रविधिमय जमाना हो । एउटा हामीलाई प्रविधि चाहियो । अर्काे बजेट चाहियो । कानुन बनाईदिए म सक्छु भनेर निर्वाचन आयोगले पहिल्यै भनिसक्यो । सर्वाेच्चले अन्य मुलुकको उदाहरण दिंदै गर्न सम्भव छ भनेकोछ । असम्भव भन्ने कुरै भएन ।
सर्वाेच्चले जवाफ माग्ने क्रममा सरकारले सकिदैन भन्यो । ब्यवस्थापिका संसद सचिवालयले पनि त्यहि भन्यो । परराष्ट्र र गृहले मेरो क्षेत्र हैन भनेर पन्छिन खोज्यो । सरकारले यो काम ब्यवस्थापिका संसदको हो भन्यो तर अहिले तत्काल सम्भव छैन भन्यो । ब्यवस्थापिका संसदले पनि अहिले संभव छैन भन्यो । सर्वाेच्च अदालतले विश्वका विभिन्न दृष्टान्त दिएर यो संभव छ भनिदियो ।
सरकारले सकिदैंन भन्ने कुरै होईन । यो ब्यक्तिले गर्ने कुरा होईन । एउटा निकायले गर्ने कुरा पनि होईन राज्यले गर्ने हो । मुख्य कुरा राज्यसंग त्यो ईच्छाशक्ति छ भने यो गर्न नसकिने कुरै होईन । के राज्यसंग आफ्नो नागरिकको मताधिकार सुनिश्चित गर्ने शक्ति पनि छैन त ? त्यति इच्छाशक्ति र शक्ति नभएकोपनि के को राज्य हुन्छ ?
राज्यले ऐन कानुन बनाएरै आफ्ना नागरिकलाई बिदेश पठाएकोछ । तिनले पठाएको रेमिट्यान्सबाट राज्य सन्चालन गरिरहेकोछ । त्यो रेमिट्यान्स पठाउने आफ्नो नागरिकको मताधिकार सुरक्षित गर्न सक्दैंन भनेर पन्छिन पाईन्छ ? श्रोत छैन भनेर बिदेश गएको नागरिकलाई उसको मौलिक अधिकारबाट बन्चित गर्न पाईंदैन । तिनले पठाएको त्यहि रेमिट्यान्सबाटै राज्यले मज्जाले ब्यवस्थापन गर्न सक्दछ ।
यदि राज्यले यत्रो ठुलो जनसंख्यालाई मतदानबाट बन्चित गर्यो भने संविधानको मुख्य मर्म नै मर्ने भो । सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा छ भन्ने तर सक्रिय मतदातालाई मतदानबाट बन्चित गर्ने भन्ने नै मिल्दैन ।
केहि देशमा प्रतिनीधि मार्फत मतदान गर्ने प्रचलन छ । मान्छे बिदेशमा छ तर उसले यहाँ नियुक्त गरेको प्रतिनिधिले उसका निम्ति मतदान गरिदिन्छ । यो हाम्रोमा ब्यावहारिक हुदैंन । हाम्रोमा मतदातालाई प्रभाव पार्ने अभ्यास छ । मतदाताको मतपत्र दुरुपयोग गरिन्छ । त्यसमाथि उसले थप बढी मतदान गर्ने अधिकार पाएपछि त्यसको मात्रा झन बढ्ने खतरा रहन्छ । उ बढी प्रभावित हुन्छ । अर्काे मतदान गरि हुलाकबाट पठाउने चलन छ । हाम्रोमा यो पनि अब्यहारिक हुन्छ । किनभने ३५ लाख मतपत्र हुलाकबाट आउने भनेको आफैमा झन्झटिलो हो ।
अर्काे बिद्युतिय मतदान प्रणाली छ । यसबाट सहज हुन सक्दछ । सम्बन्धित देशमा भएका कुटनीतिक निकाय मार्फत मतदान गराउन सकिन्छ । सम्बन्धित कुटनीतिक निकायले मतदान गराई त्यहिं मतगणना गरे पनि भो । त्यहिं प्रतिनीधि राखेर गणना गर्न सकिन्छ वा त्यसलाई देशमा पठाउन पनि सकिने भो । बढी जनघनत्व भएका देशमा त्यहि गणना गर्न ब्यवहारिक हुने भो ।
युरोपमा एक दिनभरी रेलमा यात्रा गरेर मतदान गर्ने स्थिति बन्ला । मतदान गर्न पाएको खण्डमा उ जान सक्दछ । अमेरिका जस्तो ठुलो ठाउँमा दुई तीन ठाउँमा केन्द्र बनाएर मतदान गर्न सकिन्छ । प्राविधिक कारण देखाएर अधिकारबाट बन्चित गराउन पाईएन । मतदान गर्ने नगर्ने ब्यक्तिको अधिकार हो । अधिकार दिने काम राज्यको हो । नेपालमा दुई दिन सम्म धाएर मतदान गरेको उदाहरण नेपालमै छ । त्यहाँ किन हुदैन ? म मतदान गर्न चाहन्छु भन्नेलाई मतदान गर्ने अवसर र स्थान उपलब्ध गराईदिने काम राज्यको हो । यदि यी सबै काम गर्न सम्भव छैन भने बैकल्पिक उपाय निकाल्ने काम पनि राज्यकै हो । अहिलेको जमानामा असम्भव भन्ने कुरा केहि छैन ।
के भन्ने गरिन्छ भने बिदेशमा आएका नेपाली कमाउन आएकाहुन् । तिनले दुई दुई दिन सम्म हिंडेर मतदान गरेर फाईदा के हो त ? पहिलो कुरा चासो होस् या नहोस्, मतदान गरोस् या नगरोस् यो नागरिक अधिकारको कुरा हो । राज्यले नागरिकलाई उसको अधिकारबाट बन्चित गर्न पाईंदैन भन्ने कुरा सबैभन्दा महत्वपूर्ण हो ।
मतदान भनेको एउटा पेपरमा छाप लगाएर स्वदेश पठाईदिने कुरा मात्र होईन । उसले मतदान मात्र गर्दैन दिएको मताधिकारले राज्य सन्चालनमा प्रत्यक्ष सहभागी हुने ग्यारेन्टी दिन्छ । अहिले ब्यवस्थापिका संसदमा भएका साँसदले बिदेशमा भएका नेपालीलाई किन वास्ता गर्दैनन ? किन उनीहरुको बिरुद्ध संविधान बन्यो ? किन संविधानबाटै उनीहरुको नागरिक अधिकारबाट बन्चित गरियो ? किनभने ति आफ्नो मुद्दामा राज्यलाई वार्गेनिङ गर्ने हैसियतमा छैनन ।
बिदेशमा भएकाले आफुले चाहेको ब्यक्तिलाई मतदान मार्फत छनौट गर्ने अधिकार राख्दैनन ।
यदि बिदेशमा भएका नेपालीलाई मतदान गर्ने अधिकार भएकोभए संविधानको धारा २९१ पास गर्नै कसैको हिम्मत नै हुनेथिएन । उनीहरुले नेतालाई आफ्ना कुरा राख्न सक्थे । नेताले कुरा सुन्नै पथ्र्याै । अहिले जस्तो बिदेशमा बसेका नेपालीको मुद्दालाई अवज्ञा गर्न सक्ने अवस्था आउने थिएन ।
तिनले ‘यदि तिमीले हाम्रो समस्या सुनिदिंदैनौ भने हामीले तिमीलाई किन भोट हाल्ने ?‘ भनिदिन्थे । मताधिकार भनेको चानचुने कुरा होईन । यो राज्य र नागरिकबीच हुने सम्झौता हो । राज्यसन्चालनमा पठाउनुपूर्व तिमीले यो यो काम गर भन्ने प्रक्रिया हो । जब सक्रिय मतदाताको ठुलो जनसंख्या मतदानबाटै बाहिर हुन्छ, उसले कसरी आफ्नो अधिकार प्राप्त गर्छ र जनप्रतिनीधिलाई जिम्मेवार बनाउँछ ? जब उसले मतदान नै नगरेपछि साँसदले उसको कुरा नसुनेपनि भो । संसदबाट उनीहरु बिरुद्ध ऐन कानुन बनाएपनि भो । उदाहरण छ – धारा २९१ जस्ता आफ्नै नागरिकलाई मौलिक अधिकारबाट बन्चित गर्ने कानुन बनाईन्छ ।
लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठुलो मर्म र सौन्दर्य के हो भने यदि मेरो बिषयमा निर्णय हुदैंछ भने मतदान प्रक्रियाबाट म त्यसमा सहभागी हुन पाउनुपर्दछ । तर अहिले के भो भने संसदमा मेरो बिषयमा निर्णय हुन्छ तर त्यसमा म नै सहभागी छैन । सर्वाेच्चको अहिलेको आदेशले यो कमजोरीलाई सम्बोधन गर्न खोजेकोहो । लोकतन्त्र भन्ने अनि सिमित मान्छे बसेर सम्बन्धित ब्यक्तिको सहमति र सल्लाह बेगर जे पाए त्यहि निर्णय गर्ने ?
राजनीतिक सम्बन्धि प्रतिज्ञापत्रले १९६६ सालमै भनिदिएकोछ, प्रत्येक नागरिकले आफुले मन परेको प्रतिनीधि छान्न पाउने अधिकार हुनुपर्छ । मतदान गर्न पाउने वातावरण र ब्यवस्था राज्यले बनाईदिनुपर्छ । यसमा नेपालले हस्ताक्षर गरेकोछ । मानवअधिकार सम्बन्धि घोषणापत्रले पनि यसको सुनिश्चितता गरेकोछ । अन्र्तराष्ट्रिय कानुनले ब्यक्तिको मताधिकारलाई सबैभन्दा बढी महत्व दिन्छ तर हामीकहाँ त्यहि अधिकारबाट बन्चित गराईएकोछ ।
अभिब्यक्ति स्वतन्त्रता र मतदान प्रक्रिया एकआपसमा अन्तरसम्बन्ध हुन् । अभिब्यक्ति स्वतन्त्रताको अर्थ नाराजुलुस लगाउने मात्र होईन । यो भनेको ब्यक्तिले आफ्नो विवेकले राज्यको नितिमा हस्तक्षेप गर्न पाउने अधिकार हो ।
हङकङ र ब्रिटिशको कुरा
कुनैबेला म हङकङमा ३ बर्ष जति बसेकोछु । हङकङको ‘लिगेसी’ भनेको बेलायतको ‘लिगेसी’ हो । यो भनेको राज्यले २ सय बर्षअघि ‘बेलायती सेनामा भर्ती भई उसको लागि लड’ भनेर हामीलाई पठाएको हो । त्यतिबेला अर्काको मुलुकका निम्ति लड्न जाऊ भनेर पठाएबापत राज्यले लामो समय सम्म रोयल्टी खाएकोछ । त्यसले उनीहरुका परिवारको हालत के भयो ? के खाए, के लगाए ? के गरे ? त्यसवापत कहिल्यै सोधखोज गरेन ।
बेलायती गोर्खाहरुले आफै आन्दोलन गरे । आन्दोलनको बलमा बेलायतले केहि पेन्सन बढाईदियो । पछि त्यहिं बस्न पाउने अधिकार पनि थपिदियो । तिमीहरुले मेरो मुलुकका लागि सेवा गरेको हुनाले जति बस्न चाहन्छौ बस भनेर दिएको सुविधा हो, यो ।
तिमीहरुले नेपाली नागरिकता नत्यागीकन यो सुविधा उपभोग गर्न पाउँछौ भन्यो । हङकङमा पनि त्यहि लिगेसीका आधारमा बसोबासको सुविधा दिईयो । यहि आधारमा बेलायत र हङकङमा नेपाली बसिरहेकाहुन् । यसरी बसोबास गरिरहेका नेपालीलाई त्यहाँ राजनैतिक अधिकार (मतदान गर्न पाउने र उम्मेदवार दिन पाउने ) समेत दियो ।
तर आफ्ना नागरिकलाई बेलायती सेनामा पठाएर रोयल्टी खाने राज्यले चाहिं आफ्नै नागरिकको राजनैतिक अधिकार नै खोस्यो । संविधानमै लेखेर बिदेशमा स्थायी आवासीय सुविधा पाएका नेपाली नागरिकलाई मताधिकारबाट बन्चित गर्यो । जबकि तिनले नेपाली नागरिकता नै त्यागेका छैनन । ऊ आफ्नै नागरिक हो ।
हिंजो आफ्ना नागरिकलाई अर्काको देशमा पठाएर रोयल्टी खाने राज्य आज बिदेशमा कामदार पठाएर त्यसबाट आएको रेमिट्यान्सले शासनसत्ता चलाईरहेकोछ । तर राज्यले तिनकै मताधिकार खोसेर अनागरिक बनाएकोछ । यसमा सबै दलको कुरा मिलेकोछ । धारा २९१ राज्यले आफ्नो नागरिकलाई गरेको हदैसम्मको अन्याय हो ।
नागरिक अधिकारबाट बन्चित गरेपछि के को नागरिक ? नागरिकता बोक्नुको अर्थ नै के भयो त ? धारा २९१ ले नागरिकलाई नागरिकता नै त्यागेर जाऊ भन्न खोजेको हो । बिदेशमा नागरिकता पाउने हैसियत बनाएपनि नेपालीले आफ्नो देशमा त्यो अधिकार उपभोग गर्छु भनेर नागरिकता त्यागेकोछैन तर राज्यले चाहिं त्यागेर जा भनिरहेकोछ । स्थायी आवासीय सुविधा लिए सम्बन्धित देशमा काम गर्न सहज हुने हुनाले नेपालीले त्यसरी आईडी लिएर बसेकाहुन् । तिनले नागरिकता त्यागेका हुदैंनन । तर त्यसैलाई देखाएर ‘तिमीलाई मौलिक अधिकारबाट बन्चित गरिएकोछ’ भनेर राज्यले भन्न मिल्छ ?
यो लोकतान्त्रिक देशले स्वेच्छाचारी रुपमा बनाएको नीति नियम हो जुन घोर अन्यायपूर्ण छ । संविधानमै लेखिएको हुनाले सर्वाेच्चमा मुद्दा हालेर यो धारा हटाउन सकिदैन । यसलाई परिवर्तन गर्न राजनैतिक सहमति चाहिन्छ र संविधान संशोधन गरेर मात्र हटाउन सकिन्छ । त्यसका लागि दललाई भरपुर दवाव दिन जरुरीछ, जुन अहिले सम्म भएकोछैन । त्यसैले बिदेशमा बसेका नागरिकले मतदानको महत्व बुझ्नु पर्यो ।
खुशीको कुरा के हो भने सर्वाेच्चको आदेशले अब बिदेशमा बसेकाहरुले मतदानको अधिकार पाएकाछन् । अब ति आफुमाथि भएको धारा २९१ जस्ता अन्यायपूर्ण ब्यवस्था हटाउन दवाव श्रृजना गर्न सक्ने हैसियतमा पुग्नेछन् । धारा २९१ बिरुद्ध पहिला पनि आवाज उठाउदै आएकाहुन् तर तिनको केहि जोर चलेन किनकी तिनको मताधिकार थिएन । अब चाहिं बुद्धि पुर्याए बिदेशमा बस्ने नागरिक पनि बलियो हुने अवस्थाको श्रृजना भएकोछ । बिदेशमा बस्ने सक्रिय ठुलो मतदाताले नेपाली राज्य निर्माणमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने हैसियत बनाउनेछन् ।
Tags: issue-3Prem Chandra Raiअंक-३प्रेमचन्द्र राई
पर्वको मानवशास्त्र माथि त्रिभुवन विश्वबिद्यालय केन्द्रिय मानवशास्त्र विभागका प्रमुख डा. डम्बर चेम्जोगं